Nguva yekupedzisira, iyo yazvino Google yekushandisa yeYouTube ikozvino yawanikwa kune wese munhu | IPhone nhau
Muna Kurume takakuudza nezve itsva Google kuvhura iyo yakanangana nekuita yayo yepamhepo vhidhiyo chikuva, YouTube, inoshamwaridzika. Iko kunyorera kwaakaunza kwatiri kwaive Uptime, maitiro anotibvumidza kuwana YouTube mavhidhiyo neshamwari uye nekuvatarisa pamwe chete, chimwe chinhu senge paunoratidza shamwari vhidhiyo kubva kune yako iPhone, asi uchitora mukana wezviitiko izvo internet yepasi inotipa.
Nekudaro, chishandiso ichi chaive kusvika parizvino chakatemerwa kune yakatarwa nhamba yevashandisi vakawana kuburikidza nekodhi yekuwana. Zvakanaka iyi nzira yekuisa yapera, Google yasarudza kuburitsa zvakazara Uptime uye hazvichadiwe kuti uve nekodhi yekukoka kuti uishandise.
Zvese zvachinja nhasi, sekukuudza kwandaita, kana zvirinani zvese ... kana iwe ukatsvaga iyo iOS App Store muSpain hauzviwane, nekuti Nguva yekuzorora ikozvino inowanikwa chete muUnited States of America. Nekudaro, kuburitswa kweiyi mukana wekushandisa kunoratidza kuti vangangotanga kuishandisa mune mamwe ese ezvitoro zvekushandisa mumazuva anotevera, kuti tikwanise kuchenjerera. Kuona mavhidhiyo ewaunofarira YouTuber husiku hakuzombovi chiitiko chega, unogona kugovera zvaunofunga zvirarame.
Iko kunyorera kunotibvumidza isu kutaura, kutumira zvemukati, mapinda ekuwana uye nezvimwe zvakawanda. Pasina kupokana, iyi imwe nzira inogona kushandura YouTube kuita inonakidza pasocial network. Pane rimwe divi, iko kushandiswa kunenge kuchingobvumidzwa kune imwe nhamba yevashandisi, pamwe nekuwanika kwemumwe mushandisi ari mubvunzo. Isu tinogona kuve pamusoro pezvese kubudirira neGoogle, kana kusati kwasvika gumi nemana kukundikana mukuyedza kugadzira chimwe chinhu chakafanana nesocial network.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Nguva yekupedzisira, iyo yazvino Google yekushandisa yeYouTube ikozvino yave kuwanikwa kune wese munhu
watchOS 3.2.3 beta 4 uye tvOS 11 kudzokorora zvakare mumaoko evanogadzira